Kenya ayaa ka shaqeyneysa sidii ay u fududeyn laheyd fiisaha dal ku galka ee dadka Soomaalida… – Hagaag.com
Kenya ayaa ka shaqeyneysa sidii ay u fududeyn laheyd fiisaha dal ku galka ee dadka Soomaalida…
Xoghayaha Wasaarada arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau oo socdaal ku tagay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inuu ka shaqeynayo sidii dowladdiisa u fududayn lahayd Fiisaha dal ku galka, si loo horumariyo isku socodka iyo xiriirka ganacsi ee labada dal.
Xoghayaha arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay dalkiisa uu ku qabsan yahay inuu tixgaliyo ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay, isagoo tusaale usoo qaatay dalalka Uganda, Djibouti, Ethiopia iyo Turkey oo maalin walba shirkadahooda diyaaradaha duulimaadyo joogto ah ku tagaan Soomaaliya.
“Waxaan u safray Soomaaliya aniga iyo wafdi kooban oo ka socda wasaarada arrimaha dibada oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo maaraynta iyo khubaro kale si aan u eego xaalada kooxdeena diblomaasiyadeed ee Soomaaliya,” ayuu yiri Kamau.
Wuxuu sheegay in ilaa 35,000 Kenyan ah ay ku nool yihiin Soomaaliya halka nus malyuun Soomaali ah ay sidoo kale degan yihiin xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Intii uu ku guda jiray socdaalkiisa, Macharia wuxuu eegay xaaladaha nololeed ee magaalada Muqdisho wuxuuna kala hadlay dowladda Soomaaliya arrimaha istiraatiijiyadeed iyo kuwa amni ee walaaca ku haya howlgalka Kenya ee Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya tobankii sano ee la soo dhaafay aysan aheyn kuwo hor istaagi kara iskaashiga iyo ganacsiga labada dal.